Tag: waafaqid | Martech Zone
ActiveTrail: Istaraatiijiyad Suuqgeyn Email iyo Suuqgeyn Is-gaarsiinta Suuq Fudud
Jimco, Diisambar 29, 2017 Isniin, Janaayo 1, 2018 Douglas Karr
Iyada oo laamo ku leh USA, Israel, Germany, France iyo Latin America, ActiveTrail waxay ka caawisaa ganacsiyada dhammaan qaababka iyo cabirka, adduunka oo dhan, inay kobciyaan cilaaqaadka ay la leeyihiin macaamiishooda. Laga soo bilaabo bilowgii mashruuc ahaan, shirkaddu waxay noqotay horseed, bixiye adeegyo badan oo emayl ah, oo siisa horumarsi suuqgeyn sare leh. Noocyada Suuqgeynta Suuqgeynta 'ActiveTrail Email Marketing Platform' oo ay ku jiraan Suuqgeynta Emailka - Si fudud u dhis ololeyaal emayl wax ku ool ah, mobilada ka jawaaba. Waxay yihiin qalab ballaaran oo ay ka mid yihiin kiciyayaal, maareynta xiriirka, tifaftiraha sawirka, dhalashada
6-da Jid-gooyo ee ku socda Global with your E-Commerce
Arbacada, Agoosto 30, 2017 Douglas Karr
U wareejinta iibinta omnichannel ayaa si ballaaran u muuqata, ugu dambeyntii waxaa taageeray tallaabada Nike ee iibinta labada Amazon iyo Instagram Si kastaba ha noqotee, u wareejinta ganacsiga iskutallaabtu ma sahlana. Ganacsatada iyo alaab-qeybiyeyaasha ayaa ku dadaalaya inay macluumaadka alaabada si joogto ah oo sax ah uga hayaan dhammaan meheradaha - si aad u badan oo 78% ganacsatadu aysan si fudud ula socon karin dalabaadka macaamiisha ee hufnaanta ah. 45% ganacsatada iyo alaab-qeybiyeyaasha ayaa khasaaray $ 1 + mil oo dakhli caqabado awgood